HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Afovoany Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Dusun Efik Emberá (Catío) Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guna Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Huaxtèque (San Luis Potosi) Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Kaomaorianina (Ngazidja) Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laosianina Latgalian Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mangareva Maninkakan (Atsinanana) Mapudungun Marathe Marquisien (Hiva Oa) Marquisien (Nuku Hiva) Marshall Masedonianina Maya Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mende Meru Miskito Mixe Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Pilagá Poloney Ponape Portogey Pular Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Boligaria) Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Susu Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tailandey Avaratratsinanana Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Afovoany Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Urhobo Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Sekolin’i Gileada, Patterson, any New York
Mampiavaka ny Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izay ny fampiofanana ara-baiboly isan-karazany. Misy, ohatra, sekoly natao hampiofanana ny olona manokana fotoana be dia be mba hitoriana an’ilay Fanjakana, amin’izay izy ireo afaka ‘manatanteraka tsara ny fanompoany.’—2 Timoty 4:5.
Sekolin’ny Fanompoan’ny Mpisava Lalana: Maharitra enina andro izy io, ary mety ho ao amin’ny Efitrano Fanjakana no hanaovana azy. Izay nahavita nanao mpisava lalana maharitra nandritra ny herintaona no manao azy io. Inona no tanjon’ilay izy? Mba hifandray kokoa amin’i Jehovah ilay mpisava lalana, sady hahavita tsara ny karazana fanompoana rehetra, ary hahavita hanao mpisava lalana foana.
Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana: Maharitra roa volana izy io, ary natao hampiofanana mpisava lalana maharitra za-draharaha, izay vonona hifindra any amin’ny toerana mila fanampiana. Mpivady na rahalahy mpitovo na anabavy mpitovo 23 taona ka hatramin’ny 65 taona no afaka manao an’io sekoly io. Manahaka an’i Jesosy Kristy, ilay mpitory ny vaovao tsara lehibe indrindra, izy ireo, ka toy ny milaza hoe: “Intỳ aho iraho!” (Isaia 6:8; Jaona 7:29) Mety ho tsy maintsy hanatsotra ny fiainany ilay mpisava lalana, any amin’izay tany anendrena azy. Mety ho samy hafa be amin’izay nahazatra azy ny toetrandro sy ny sakafo ary ny fombafomba. Angamba izy mila mianatra ny fitenin’ny olona any mihitsy. Hanampy azy hanana ny toetra ilaina amin’izany àry io sekoly io, sady hahatonga azy ho ampy fahaizana mba hahavitana zavatra betsaka kokoa ho an’i Jehovah sy ny fandaminany.
Sekoly Ara-baibolin’i Gileada: Midika ara-bakiteny hoe “Antontam-bato Vavolombelona” ny hoe “Gileada”, amin’ny teny hebreo. Tamin’ny 1943 no nanomboka nisy io sekoly io. Efa 8 000 mahery no nahazo diplaoma tamin’izy io, ary notendrena ho misionera izy ireo mba hitory “hatrany amin’ny faran’ny tany.” (Asan’ny Apostoly 13:47) Tena nisy vokany be ilay izy. Mbola tsy nisy fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy, ohatra, tany Peroa, tamin’ny vao tonga tany ny misionera nahavita Sekolin’i Gileada. Misy fiangonana 1 000 mahery anefa any izao. Hoatr’izany koa tany Japon. Tsy ampy folo akory ny Vavolombelon’i Jehovah tany, tamin’ny vao nisy misionera, nefa lasa 200 000 mahery izao izy ireo. Maharitra dimy volana ny Sekolin’i Gileada, ary ny Tenin’Andriamanitra no tena halalinina mandritra an’ilay izy. Mpisava lalana manokana na misionera na mpiandraikitra ny faritra na Betelita no asaina manao an’io sekoly io. Ampiofanina tsara izy ireo mba ho afaka hampandroso ny asa maneran-tany.
Inona no tanjon’ny Sekolin’ny Fanompoan’ny Mpisava Lalana?
Iza no afaka manao ny Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana?
Vavolombelon’i Jehovah—Voalamina mba Hitory ny Vaovao Tsara
Mampianatra Baiboly maneran-tany no tena ahafantarana ny Vavolombelon’i Jehovah. Ahoana no andaminana sy itarihana ary anohanana ara-bola an’io asa io?
Ampiofanin’i Jehovah ny Mpitory Ilay Fanjakana
Misy sekoly maromaro natao hanampiana ny mpitory hahavita tsara ny fanompoany. Inona avy izany?